Optical Distribution Socket Manufacturers sy Suppliers | China Optical Distribution Socket Factory
Optical distribution faladiany (teboka) antsoina koa hoe mpampiasa farany fampijanonana boaty dia miraikitra toy ny manda fivoahan'ny. Optical teboka distribution natao ho an'ny FTTH vahaolana sy ny matoantenin'ny atao Optical tambajotra. Ny hoe mora raisina FTTH fampiharana, fibre Optical faladiany dia ampiasaina mba hamarana fibre Optical tady, tady Patch, pigtail kofehy, miaraka amin'ny mpanjifa adapters araka ny fepetra.
FTTH fibre optic faladia roa, na efatra seranan-tsambo, izay manome ny fametrahana ny iray na roa fibre optic adapters, naorina eo amin'ny dian-tongotra SC tsy tapaka.
Jera ny fibre optic famaranana vata milina manome fiarovana, malefaka fibre fitantanana sy ny fanaraha-maso ny lalana, mora noho ny fametrahana endri-javatra, ampiharina amin'ny famolavolana ny rehetra FTTH Fibre optic famaranana boaty.
Jera manolotra ny FTTH fibre optic faceplates, miaraka ilaina FTTH Accessories: Fibre Optic Pigtail, Fibre Optic Patch Tady, Fibre Optic adaptatera, Fiarovana Sleeve, Fibre optic famaranana Box, Fibre Optic Splice Mikatona Mitete tariby clamps, Down hitarika clamps, pole fononteny mahitsy , pole asio fehy, Anchoring sy Suspension clamps, tariby malaina fitehirizana, sns atolotsika vita indrindra atao Optical ampahany amin'ny FTTH fangatahana.
Rehetra ny FTTH Accessories nandalo fandidiana traikefa ny fitsapana miaraka amin'ny mari-pana manomboka amin'ny -60 ° C hatramin'ny +60 ° C fahanterana fitsapana, harafesiny manohitra fitsapana, fitsapana IP sns
FTTH Optical distribution faladiany ODP-06
FTTH Optical distribution faladiany ODP-01H
FTTH Optical distribution faladiany ODP-04
FTTH Optical distribution faladiany ODP-02M